MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA BOXITA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Feedhyahan / Akita Eeyo Nooc Isku Daran ah
'Kani waa eeygayga Sabo. Isagu waa Feedhyahan / Akita qas laakiin waxaan jecel nahay inaan ugu yeerno Boxita. Sabo waa eey baashaal ah oo firfircoon. Wuxuu ku dhashay Halloween ka a qashin 11 . Waxaan helnay markii uu jiray kaliya 6 toddobaad. Wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale ee park eey runtiina waa ku weyn yahay carruurta. Isagu waa isku darka saxda ah ee Feeryahan iyo Akita sababtoo ah daacadnimadiisa weyn ee milkiilayaashiisa iyo midabkiisa iyo cabirkiisa. Sabo wuxuu ahaa eey aad u weyn, had iyo jeerna madaddaaliya, oo faraha igu haya. Wuxuu ku dhow yahay sanad jir wuxuuna dareemayaa sidii shalay oo kale inuu ahaa eey jilicsan, oo la nuujiyo. '
Boxita ma ahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Feedhyahan iyo Akita . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Sabo Boxita oo ah eey (Boxer / Akita mix)
Sabo the Boxita oo aan weli si buuxda u koray (Boxer / Akita mix dog dog)
Aldo the Boxita oo jira 1 1/2 sano jir waa 3/4 Akita 1/4 Boxer— 'Eygan wuxuu ahaa mid taam ah !!! Waxaan isaga dooranay (1 ee 8) isla markiiba ... xayawaankeenii ugu horreeyay ee gurigeenna ugu horreeya (waqtiga uu wiilkeennu jiray 4 bilood). Aldo wuxuu fuushay 30-ka daqiiqo ee wadida dhabta ah. Ayeeyaday waxay lahayd isku-darka Akita, qiimaha iyo taranka (cilmi-baaristayda ka hor intaanan iibsan eey) ayaa sax ahayd. Eygan ayaa si sax ah ugu habboon !!! Isagu waa AAD macaan, ilaaliya, oo wuxuu jecel yahay wiilkeena (saaxiibbada ugu fiican)! Wuxuu qabay dhibaato yar oo ruugis ah dhawr bilood, laakiin wuu ka saxay, waa AAD macaan oo Wanaagsan !!! Kuma farxi karno eyga Aldo, lug weyn! '
Aldo the Boxita oo jira 1 1/2 sano oo carrabkiisa weyn ku dhejinaya waa 3/4 Akita 1/4 Boxer.
Aldo the Boxita sida eey yar oo 10 toddobaad jir ah waa 3/4 Akita 1/4 Boxer.
Aldo the Boxita oo ah eey yar oo 10 toddobaad jir ah oo uu ku ciyaarayo waa 3/4 Akita 1/4 Boxer.
Liistada eeyaha ee loo yaqaan 'Akita Mix ey'
kalabar jiir badh chihuahua
isku darka 'pitbull' iyo 'staffordshire terrier mix'
feeryahan isku qasan bulldog ingiriis
boston terrier iyo jack russell oo ah ey
adhijirka reer germany akita mix puppy